Ganacsade caan ah oo xalay lagu dilay Beledweyn – STAR FM SOMALIA
Ganacsade caan ah oo xalay lagu dilay Beledweyn
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ayaa sheegaya in Ganacsade caan ahaa xalay lagu dilay magaalada, iyadoo ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen dad lagu tuhmayo inay dilkaas ka dambeeyay.
Ganacsadahan oo lagu magacaabayay Muumin Cabdulle Daqare ayaa waxaa toogasho ku dilay kooxo bastoolado ku hubeysan, kuwaasoo baxsaday.
Ciidamada Ammaanka oo howl gallo ka sameeyay xaafadaha magaalada Beledweyn ayaa gacanta ku soo dhigay dhowr ruux oo lagu tuhmayo dilkaas.
Saraakiisha Amniga ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan dadkaas, isla markaana saacadaha soo socda la soo bandhigayo natiijada baaritaanka.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada, waxaana muddooyinkan isa soo tarayay dilalka ka dhacayay magaalada.
Dagaal Khasaare geystay oo xalay ka dhacay Degmada Qoryooley
Waxaa Sii kordhaaya Musharixiinta iska diiwaan galinaayo Xarunta Villa Hargeysa